October 19, 2020 - Online Hartha
ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ဘယ်သူ ခံလိုက်ရသလဲ ?(ဖြစ်ရပ်မှန်)
တစ်ခါကရွာတစ်ရွာမှာ အလွန်သဘောကောင်းတဲ့ တောင်သူကြီး တစ်ယောက် ရှိပါတယ် ။ သူဟာလူတစ်ဖက်သားကိုလည်း အလွန် သနားတတ် ပါသတဲ့ ။ တစ်နေ့တော့ နေစရာထိုင်စရာမရှိလို့.. ယောင်ချာချာဖြစ်နေတဲ့ လင်မယား နှစ်ယောက်ကို ခေါ်လာပြီး သူ့ ယာတဲလေးမှာ နေထိုင်ခွင့် ပေး ထားပါသတဲ့ ။ ဆန်နဲ့ဆီ၊ ဟင်းချက်စရာ တို့တို့ တိတိတွေကိုလည်း တစ်လစာ လောက် ပေးလိုက် ပါသေးတယ် ။ နေစရာတဲလေးကလည်း အဆင်သင့်ပါပဲ ။ တစ်ဧကကျော်လောက်ရှိတဲ့ ယာကွက်ထဲမှာ သီးနှံလေးတွေကိုလည်း စိုက်ခွင့် ပေးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့.. သူ့ရဲ့အိုစာမင်းစာအတွက် ဆိုပြီး စိန်တလုံးသရက်ပင် ၊ သံပုရာပင် နဲ့ ပိန္နဲပင်လို နှစ်ရှည်ပင် အချို့ကို စိုက်ခိုင်း ပါသတဲ့ ။ ဘူး … Read more
ညအိပ်မပျော်လျှင် အိမ်တွင်းသမား‌တော် ကုထုံးလေးများ
ညအိပ်မပျော်လျှင် အိမ်တွင်းသမား‌တော်ကုထုံး ၁. ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ ။ အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်းပြီး အားရှိသည်။ ၂. နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည် ။ ၃. ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက်၃တက်ထားအိပ်ပါ ။ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေသည် ။ ၄. ကြက်သွန်နီထက်ခြက်ခွဲပြီး ညအိပ်ခါနီး ခြေဖဝါး အလည်တည့်တည့်ကပ်အိပ်ပါ ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှ အဆိပ်အတောက်များကို စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။ အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကြီးမရွေး လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါမည် ။ ဦးမြကြိုင် ကိုယ်တိုင်စမ်သပ်ပြီးမှ မျှဝေသည်…။ ကိုယ်ကျမ်းမာ၍ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ… Unicode Version ညအိပျမပြျောလြှငျ အိမျတှငျးသမား‌တျောကုထုံး ၁. ဖီးကွမျးငှကျပြောသီး မှညျ့စားပါ ။ အိပျစကျခွငျးတှကျ အထူးကောငျးမှနျးပွီး အားရှိသညျ။ ၂. … Read more